Ahoana ny fanovana endrika mijery amin'ny Android Wear | Androidsis
Ahoana ny fanovana endrika mijery amin'ny Android Wear
Ignacio Sala | | SmartWatch, Tutorials
Ny rafitra fiasan'ny fitaovana finday Android dia niavaka hatrany tamin'ny fanolorana amina isa marobe safidy manokana, zavatra izay tsy hitantsika amin'ny sehatra finday hafa, na dia nihatsara be aza ny iOS an'ny Apple tao anatin'ny taona vitsivitsy. Saingy ny Android dia tsy manome safidy safidy manokana ho antsika ihany, fa ny kinova ho an'ny smartwatches dia manome antsika fiasa mitovy amin'izany.
Wear OS, izay nantsoina taloha hoe Android Wear, dia manome safidy betsaka antsika raha miresaka ataovy personalize ny fitaovantsika amin'ny endrika boribory. Ny mpanamboatra tsirairay dia misy andiana sfera izay ahafahantsika manampy fahasarotana samihafa hanehoana fampahalalana bebe kokoa na kely. Ny fahasarotana dia tsy misy raha tsy amin'ny Wear OS 2.0.
Araka ny efa nomarihako tao amin'ny andalana teo aloha, ny mpanamboatra tsirairay dia mametraka andiany faritra misy eo amintsika manarona ny ankamaroan'ny filan'ny mpampiasa, Na dia momba ny tsiro loko aza, ao amin'ny Play Store dia azontsika atao ny mampiasa faritra maro be azontsika ampiasaina, fa hiatrika izany isika amin'ny lahatsoratra iray hafa.
Ny Wear OS dia miavaka amin'ny tsy famelana, ny mpamokatra, tsy misy sosona fanaingoana, izay manamora ny fahatongavan'ireo fanavaozam-baovao navoakan'ny Google an'ity rafitra fiasa ity, zavatra izay tokony ampiharina amin'ny finday avo lenta amin'ny ho avy fa araka ny fantatsika rehetra dia tsy hahavita izany velively. Raha te hiova eo amin'ireo sehatra samihafa apetraky ny mpanamboatra tsirairay avy amintsika ianao dia tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto:
Manokatra ny fampiharana Wear OS izahay aloha.
Raha vantany vao nosokafanao izany dia hiseho ny sarin'ilay fitaovana ary etsy ambany fotsiny dia aseho ny sasany amin'ireo sehatra ananantsika ao anatin'io fizarana io fanehoam famantaranandro.
Raha te hiditra amin'izay rehetra atolotray antsika, dia tsy maintsy manindry isika bebe kokoa.
Avy eo dia haseho izy ireo ny sehatra rehetra apetraky ny mpanamboatra eo am-pelatanantsika. Raha mifantina ny iray amin'izy ireo dia mila tsindrio fotsiny isika.
Raha te-hanamboatra ny fahasarotana misy isika dia tsy maintsy ataontsika mivantana amin'ny fiambenana, tsy azontsika atao amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ahoana ny fanovana endrika mijery amin'ny Android Wear
Finday misy fakan-tsary 16? LG dia nanao patanty iray fotsiny
SPC Baamba Gyro 4.0 dia mpanadio banga amin'ny robot miaraka amin'i Alexa sy Google Assistant